नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुस् सजिलै दोष कट्टा हुन्छ — Sanchar Kendra
नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यसो गर्नुस् सजिलै दोष कट्टा हुन्छ
एजेन्सी । सपनाले वास्तविक जीवनका धेरै पक्षबारे जानकारी दिन्छ । कहिलेकाही नराम्रा सपना देखिन्छन् जसका लगि केही विधि अपनाउनु जरूरी छ। यसो गरेको खण्डमा नराम्रा सपनाको दोष कट्टा हुन्छ ।
१- खराब सपना देखेर व्युँझियो भने फेरि सुतेपछी उत्त सपनाको असर समाप्त हुन्छ। २-अत्यन्तै अशुभ सपना देखे निम्न श्लोक तीन पटक वा यथाशक्य जप गरे खराब सपनाको फल नष्ट हुन्छ।
३-भगवान बिष्णुको निम्न आठ नामहरु बिहानको नित्यकर्म सकेर पुर्वतर्फ फर्केर भक्तिपूर्वक स्मरण गरे खराब सपनाको प्रभाव नष्ट हुन्छ। ४-निम्न मन्त्रको जप दश पटक गर्ने शास्त्रोत्त विधान बताइएको छ। ५-खराब सपनाको अशुभ फल नाश गर्न विहानै उठेर स्नान आदि गरी भगवानको प्रार्थना स्मरण र यथाशक्य दान गर्नु उपयोगी हुन्छ।
यस्तै अत्यन्त परिश्रम र मेहनतका बावजुद पनि कुनै काममा सफलता पाइरहनु भएको छैन भने केहि दोष हुनसक्छ । जीवनमा आर्थिक समस्या आइरहेको छ वा रोकिएको धन फिर्ता भएको छैन भने राशी अनुसारको केहि उपाय गरेमा यो समस्या हटेर जाने धार्मीक मान्यता छ ।
जान्नुहोस् राशी अनुसारको उपाय
मेष राशी- नियमित सूर्य देवको आराधना गरी लक्ष्मीनारायणलाई गुलियो खिर अर्पण गर्नुहोस् । वृष राशी- नित्य बिहानै भगवान शिवको दर्शन गरी शुक्रवार शिवलिंगमा साबुदाना अर्पण गर्नुहोस् ।
मिथुन राशी- बिहानै देवी लक्ष्मी वा दुर्गाको दर्शन गरी गणेशलाई रातो फूल अर्पण गर्नुहोस् । कर्कट राशी- नित्य बिहान भगवान कृष्णको दर्शन गरी तुलसी, मिश्री र मख्खनको भोग लगाउनुहोस् ।
सिंह राशी- हरेक बिहान सूर्यनारायणको दर्शन गरी रातो गुलाफ हनुमानजीको चरणमा अर्पण गर्नुहोस् । कन्या राशी- नियमित बिहान भगवान गणेशको दर्शन गरी देवी दुर्गालाई सेतो चामल अर्पण गर्नुहोस् ।
तुला राशी- भगवान लक्ष्मीनारायणलाई कमलको फूल अर्पण गरी हनुमानलाई लड्डुको भोग दिनुहोस् । वृश्चिक राशी- विष्णु मन्दिरमा तुलसी रोप्नुहोस् र व्यापारी वर्गले यात्रापूर्व श्रीराम स्तुति पाठ गर्नुहोस् ।
धनु राश- नित्य हनुमानजीको दर्शन गरी पिपलमा मिठाई अर्पण गरेर केशरको टिका लगाउनुहोस् । मकर राशी- बिहान देवी गायत्रीको दर्शन गरी महत्वपूर्ण काममा जानुपूर्व सेतो फूल साथमा लानुहोस् ।
कुम्भ राशी- केराको बोटमुनी दियो बाली महत्वपूर्ण कामपूर्व हनुमानलाई मीठा पान अर्पण गर्नुहोस् । मीन राशी- विष्णुलाई केसरको टिका लगाएर आफु लगाउनुहोस् र लक्ष्मीलाई गुलियो प्रसाद अर्पण गर्नुहोस् ।
ज्योतिष विज्ञान सँग सम्बन्धित
कुन महिनामा जन्मिएका मान्छे कति भाग्यमानी ? तपाई पनि थाहा पाउनुहोस
यी ४ राशि भएका मानिससंग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की
यी राशि हुने प्रेमी-प्रेमिका कहिले पनि छुट्नु पर्दैन, तपाई पनि थाहा पाइराख्नुहोस्
इतिहासकै दुर्लभ क्षण खण्डग्रास चन्द्रग्रहण, आज १२ बजेपछि फेरिदैछ यी ४ राशिको भाग्य